ပုံပါအပင်ကအခုမြင်နေရသော အပင်လေးက ကျောက်ကပ်မကောင်းသော ကျွန်တော့်သမီးငယ်လေးရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဆေးပင်လေးပါ…. – စှယျစုံသုတ
ပုံပါအပင်ကအခုမြင်နေရသော အပင်လေးက ကျောက်ကပ်မကောင်းသော ကျွန်တော့်သမီးငယ်လေးရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဆေးပင်လေးပါ….
အပင်နာမည်ကဆင်နှာမောင်းပင် နားကပ်ပင်လို့လည်ခေါ်ပါတယ်။သမီးလေး ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ခုနှစ်ပညာတက္ကသိုလ်ပညာသင်နှစ်နဲ့ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်တွေမှာကျောက်ကပ်ဖြစ်ပြီးကျောင်းမတက်နိုင်ဘဲဆေးခန်းဆေးရုံး အထူကုတွေနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။
ယခုပုံပါအပင်လေဖြစ်တဲ့ဆင်းနှာမောင်းပင်အာမြန်မာဆေးဆရာကအပင်နုတ်ရေဟြေင်အောင်ဆေး၍ပဉ္စ ငါးပါးပြုတ်၍သောက်ခိုင်ခဲ့ရာရောဂါသည်လုံးဝပေါက်ကင်းသက်သာပြီး ယခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်နဲ့ပတ်သတ်လျှင်အထူးကောင်းကြောင်းကိုယ်တွေ့ခံစားရလို့မျှဝေးပေးလိုက်တာပါ။ဆင်နှာမောင်းပင်(အရှင်နာဂသိန်ကျမ်း)နှစ်မျိုးရှိသည်။ ဆင်းနှာမောင်းလေးနှင့် ဆင်နှာမောင်ကြီးဖြစ်သည်။
ဆင်နှာမောင်းကြီးသည် ခါးသော အရသာဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သော အဖျားကို ပျောက်ကင်းစေသည်။နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကို ပျောက်ကင်းစေသည်။ အနာကို သုတ်သင်နိုင်ပြီး အသားနုကို တက်စေသည်။
အနာများ ရောင်တင်းသောအခါ ယင်းအရွက်ကို ပတ်တီးစည်းပေးပါက လျှင်မြန်စွာ အရောင်လျော့သည်။မျက်ရည်ယိုခြင်းနှင့် မျက်ခွံရောင်ခြင်း ယင်းသတ္တုရည် ကို သုတ်လိမ်းပေးပါက လျှင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းသည်။စာကိုး – အရှင်နာဂသိန်ဆေးကျမ်း/ မြန့်မာဆေးဝါးပင်များရောင်ပြန်မဂ္ဂဇင်း
ပုံပါအပငျကအခုမွငျနရေသော အပငျလေးက ကြောကျကပျမကောငျးသော ကြှနျတေျာ့သမီးငယျလေးရဲ့ကယျတငျရှငျဆေးပငျလေးပါ….
အပငျနာမညျကဆငျနှာမောငျးပငျ နားကပျပငျလို့လညျချေါပါတယျ။သမီးလေး ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ခုနှဈပညာတက်ကသိုလျပညာသငျနှဈနဲ့ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ပညာသငျနှဈတှမှောကြောကျကပျဖွဈပွီးကြောငျးမတကျနိုငျဘဲဆေးခနျးဆေးရုံး အထူကုတှနေဲ့အခြိနျကုနျခဲ့ပါတယျ။
ယခုပုံပါအပငျလဖွေဈတဲ့ဆငျးနှာမောငျးပငျအာမွနျမာဆေးဆရာကအပငျနုတျရဟွေငျေအောငျဆေး၍ပဉ်စ ငါးပါးပွုတျ၍သောကျခိုငျခဲ့ရာရောဂါသညျလုံးဝပေါကျကငျးသကျသာပွီး ယခုနှဈ တက်ကသိုလျဝငျတနျးအောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။
ကြောကျကပျနဲ့ပတျသတျလြှငျအထူးကောငျးကွောငျးကိုယျတှခေံ့စားရလို့မြှဝေးပေးလိုကျတာပါ။ဆငျနှာမောငျးပငျ(အရှငျနာဂသိနျကမျြး)နှဈမြိုးရှိသညျ။ ဆငျးနှာမောငျးလေးနှငျ့ ဆငျနှာမောငျကွီးဖွဈသညျ။
ဆငျနှာမောငျးကွီးသညျ ခါးသော အရသာဖွဈသညျ။ ပွငျးထနျသော အဖြားကို ပြောကျကငျးစသေညျ။နာကငျြကိုကျခဲမှုကို ပြောကျကငျးစသေညျ။ အနာကို သုတျသငျနိုငျပွီး အသားနုကို တကျစသေညျ။
အနာမြား ရောငျတငျးသောအခါ ယငျးအရှကျကို ပတျတီးစညျးပေးပါက လြှငျမွနျစှာ အရောငျလြော့သညျ။မကျြရညျယိုခွငျးနှငျ့ မကျြခှံရောငျခွငျး ယငျးသတ်တုရညျ ကို သုတျလိမျးပေးပါက လြှငျမွနျစှာ ပြောကျကငျးသညျ။
ခေါင်းကိုက်၊ကိုယ်လက်မအီမသာ၊ဇက်ကြောတက် သလိုဖြစ်နေလျှင် ဒီနည်းလေးစမ်းကြည့်ပါ